Nhau - Chii chinofadza
Zvakawanda vatengi vedu vanotanga kushandisa cheertainer kuzadza zvigadzirwa zvemvura.
Zvino, chii chinofadza?
Yayo chigadziko chitsva chekupakata chinosanganisa kuchinjika kweBhegi muBhokisi uye zvakavandudzwa zvakanakira zvigadzirwa zvakaomarara kana zvakaomarara, izvo zvinoita kuti cheeratainer ive yakanakisa sarudzo kune dzese idzi sarudzo. Iyo inoumbwa necube-yakaumbwa, yakawanda-yakaturikidzana plastiki bhegi, kapu kana vharuvhu uye bhokisi remabhokisi.
Chimiro chayo chakaita kunge cube chinochipa kugadzikana kukuru uye kugona kwakanyanya kubvisa. Iine zvidimbu zviviri: Rokunze rukoko: (polyamide + polyethylene) inodzivirira kubva kuokisijeni uye unyoro; huwandu hwayo uye kuumbika kunosiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi. Iko kusanganiswa kwematanho ese ari maviri kunopa iyo mudziyo chimiro chinoshanduka asi chakasimbiswa.
Kana izere, nebhokisi rayo remabhokisi, rakanyatso kurongedzwa, richiumba puru yakagadzikana, isina njodzi. Kana isina chinhu, zvinhu zvacho zvinogona kutakurwa nekuchengetwa zvakapetwa, nokudaro zvichideredza nzvimbo inodiwa. Uku kudzikisira kunotungamira mukuchengetedza hupfumi.
Cheertainer inogona kushandiswa kune ese marudzi emvura uye semi-emvura zvigadzirwa zvemaindasitiri uye epamba kudyiwa. Mapato ayo makuru ayo akaitirwa ndeaya:
• Makemikari nemaAgrochemicals (mafuta ekuzora, pendi, zvinonamatira, inki, kurima, zvipfuyo, kurapwa kwemvura, mafuta emvura, mishonga yekuzora). Detergents
Cheertainers vari kubatsira mutengi kudzikisa mutengo.
l 60% kudzikisira mumari yekuchengetera
l 20% Kuderedza mumagetsi emagetsi
l 50% Kuderedza mukutakura mari
l 90% Kuderedza mukudzokorodza mari
Bhokisi remabhokisi eanofarira rine zvarinobatsira:
Bhokisi remakatoni i100% inogadziriswazve.
Makuru, akazara akagadzika pamusoro penzvimbo yekutaurirana kwakajeka.
Yakagadziridzwa stacking uye palletising, iyo inoderedza zvigadzirwa zvemari.
Masikisi akasiyana uye dhizaini yakagadzirirwa zvakakwana kugutsa zvido zvemumwe mutengi kana chigadzirwa.
Post nguva: Sep-06-2020